सुनचाँदीको मूल्य लगातार बढोत्तरी, मंगलबार २ सय रुपैयाले बढ्यो, कतिमा हुँदै छ कारोबार ? - Artha Path Artha Path
सुनचाँदीको मूल्य लगातार बढोत्तरी, मंगलबार २ सय रुपैयाले बढ्यो, कतिमा हुँदै छ कारोबार ?
काठमाडौं । मंगलबार छावावाल सुनको मूल्य तोलामा २ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ९० हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । तेजावी सुनको मूल्य तोलामा २ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ९० हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य तोलामा २५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १३ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ ।
सोमबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ४ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ९० हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, तेजावी सुनको मूल्य तोलामा ४ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ८९ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य तोलामा ५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
आइतबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ९० हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, तेजावी सुनको मूल्य तोलामा ५० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ८९ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेर प्रतितोेला १२ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ९ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ८९ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । तेजावी सुनको मूल्य तोलामा ८५० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ८९ हजार ४५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, चाँदीको मूलय तोलामा २० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला १२ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।